Vaovao - Fifanakalozana indostrialy tamin'ny Oktobra
Fifanakalozana indostrialy tamin'ny volana oktobra
Amin'ny maha mpanamboatra lozisialy vy sy mpamatsy serivisy fitsaboana ambony any Sina azy, ny TAA dia mandray anjara mavitrika amin'ny fikarohana ara-teknika sy ny fifanakalozana indostria maro any Shina. Tamin'ny volana oktobra dia nandray anjara tamin'ny fivoriana fifanakalozana teknika an-trano 3 lehibe izahay hanakalozana sy hizarana hevitra amin'ireo indostria isan-karazany hahazoana miaraka fampandrosoana.
Ny sampana fandefasana fiara automobile an'ny Fikambanana mpanorina sinoa 2020 fihaonambe isan-taona
Ny teknolojia fanodinam-bola maivana fiara sinoa, ny sampana fandefasana automatique an'ny fikambananan'ny orinasa mpanorina sinoa 2020 dia natao tamin'ny faha-13-15 Oktobra 2020 tao amin'ny faritany Yulin Guangxi. Ny fivoriana fanao isan-taona dia nifantoka tamin'ny fironana indostrialy fananganana fiara, fanavaozana, faharanitan-tsaina, sariaka amin'ny tontolo iainana, ary filalaovana maivana mba hanaovana tatitra sy fifanakalozana. Nanao tatitra manokana momba ny "The Brake System Parts Shot Blasting Equipment and Special Abrasives Application" izahay, izay nohazavaina tsara momba nyfitaovana fitifirana notifirina ampiasaina amin'ny singa Braking system sy ny manokana anay tifitra variraraka.
Fihaonambe teknolojika nasionaly faha-06 momba ny fitifirana firenena
Ny Konferansa teknolojika nasionaly faha-6 an'ny zotram-pirenena The National National Abrasives Media Conference dia natao tamin'ny faha-14-17 Oktobra 2020 tao Henan Providence. Ny valan-dresaka dia nanasa manam-pahaizana sy manam-pahaizana fanta-daza ao an-trano sy any ivelany hanome tatitra manokana momba ny sisintany iraisampirenena sy ireo olana ara-teknika lehibe amin'ny fikarohana ankehitriny sy ny fampiharana ny teknolojia fitifirana. Nandritra ny fihaonambe dia nanao tatitra manokana izahay momba ny "Fikarohana Teknolojia momba ny fitaovam-piadiana mahery vaika notifirina avy tany Eoropa ary nanamafy ny fangatahana vy nitifitra," ary nifanakalo hevitra tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny fampiharana ny avo lentafitaovana fanapoahana tifitra nohamafisina SY tifitra vy nohamafisina.
Fihaonambe fifanakalozana teknolojia fifanakalozana sambo sy fampiroboroboana an-dranomasina 2020
Tamin'ny 24 Oktobra, natao tao Longxue Island, Guangzhou, ny Konferansa fifanakalozana teknolojia an-dranomasina sy an-dranomasina nokarakarain'ny Fikambanana fisorohana ny zezika any Guangdong sy ny Guangzhou Shipyard International. Ny lohahevitry ny kaonferansa dia ny "Ship and Offshore Engineering, Green painting". Nandritra ny fihaonambe dia nanao tatitra manokana momba ny "Fikarohana momba ny fisafidianana sy ny teknolojia fanatsarana ny fanasokajiana masiaka ho an'ny fitsaboana amin'ny sisin-dranomasina" izahay, nifanakalo ary nizara ny fisafidianana sy ny fanatsarana ny abrasives mba hampiroboroboana ny fampiharana ny haitao fandrakofana maitso.